रुदा पनि यति धेरै फाइदा ! « Khasokhas Follow @khasokhasmag
रुदा पनि यति धेरै फाइदा !
प्रकाशित मिति : श्रावण ४, २०७६ शनिबार
आँखा सफा राख्छ
रुँदा तीन किसिमका आँसु झर्छन् । रिफ्लेक्स, लगातार भरिरहने र भावनात्मक आँसु । रिफलेक्स आँसुु धुलो–धुवाँ आदिका कारण झर्छ । यसले आँखामा पसेका वस्तुलाई बाहिर निकाल्छ । निरन्तर झर्ने आँसुले आँखामा हुने संक्रमणबाट बचाउँछ । यसमा करिब ९८ प्रतिशत पानी हुन्छ । त्यस्तै, भावनात्मक आँसुमा तनाव हर्मोन र अन्य विषाक्त वस्तु बाहिर आउँछन् ।
पीडा कम गराउँछ
रुँदा शरीरमा भएको ओक्सिटोकिन र इन्डोजिनियस नामक पीडाको हर्मोन आँसुको माध्यमबाट बाहिर आउँछ । त्यसैले, रोएपछि स्वतः पीडा कम हुन्छ । शारीरिक र भावनात्मक दुवै पीडालाई कम गर्न मद्दत गर्छ । पीडा भएका वेला रोएमा एकछिनमै शान्त महसुस गराउँछ ।
मुड राम्रो हुन्छ
शरीरमा म्याग्निजको मात्रा बढी हँुदा थकाइ लाग्ने, रिस उठ्ने, डराउने आदि समस्या देखिन्छन् । कहिलेकाहीँ मस्तिष्कको तापमान एकदमै बढेर जान्छ । यसले मुड परिवर्तन गराउँछ । ठूलो स्वरले रुँदा मस्तिष्कका नसामा सजिलै अक्सिजन पुग्छ, यसले तापक्रम कम गराउँछ । फलस्वरूप रोएपछि शान्त महसुस गर्न सकिन्छ ।
रुनुको प्रमुख कारण तनाव हो । रुँदा तनाव हार्मोन तथा अन्य रसायन सक्रिय हुने भएकाले आँसुको माध्यमबाट बाहिर निस्कन्छन् । जसले गर्दा तनाव स्वतः कम हुन्छ ।
विशेषगरी, रुने बच्चामा राम्ररी निद्रा पर्छ । दिउँसोको समयमा बढी रुने बच्चा राति निदाउँछन् । जसले गर्दा उनीहरू स्वस्थ हुन्छन् । त्यस्तै, रुँदा वयस्कहरूमा पनि मन हलुंगो हुने, तनाव हराउने र मुड राम्रो हुने भएकाले निद्रा मज्जाले पर्छ ।
रुँदा आँसुले ब्याक्टेरियालाई मार्ने भएकाले आँखामा संक्रमण हुनबाट बचाउँछ । त्यस्तै, आँखामा भएका विभिन्न रसायन बाहिर आउने भएकाले दृष्टिको समस्या निकै कम हुन्छ ।
विश्वका सबैभन्दा बढी उमेरका जीवित व्यक्ति ११२ बर्षका डोन मिलो, दीर्घजीवनको रहस्य ‘प्रेम’
विश्वका सबैभन्दा बढी उमेरका जीवित व्यक्ति पोर्तोरिकोका ११२ बर्षका डोन मिलो रहेको गिनिज वल्र्ड रेकर्डले